Russiya: Putin oo soo bandhigay Nuclear cusub, una digay Maraykanka & NATO – Kasmo Newspaper
Russiya: Putin oo soo bandhigay Nuclear cusub, una digay Maraykanka & NATO
Updated - March 1, 2018 5:20 pm GMT
London (Kasmo), Dalka Russiya ayaa diyaarsaday hub Nuclear ah oo Istrateeji ah kana dheereeya codkiisa (Hypersonic Weapon), awoodna u leh in uu ka gudbo hannaan kasta oo difaac ah oo uu ku jiro midka Maraykanka ‘Scud’ ee Yurub iyo Asia.
Madaxweyne Vladimir Putin qudhiisa ayaa kaga dhawaaqay khudbaddii sannadlaha ahayd ee maanta uu ka jeediyay xubnaha 2da Aqal ee Barlamaanka Federaalka hortooda, kaas oo sidii caadada ahayd aan ka dhicin Xarunta ‘Cremlin’ laakiin lagu qabtay dhisme aan ka fogeyn oo taariikhi ah laguna dhigo xafladaha.
Iyada oo ay inaga xigaan wax ka yar 3 toddobaad doorashooyinka madaxnimada ee 18ka March, oo sida la filayo isaga soo celin doona, Madaxweynuhu wuxuu Caalamka u so bandhigay noocyadii u dambeeyay oo Nuclear ah oo cid kale oo haystaa jirin, isla markaana gaari kara cirif kasta oo dunida ah.
Sida gantaalka ‘RS-28 Sarmat’ oo nooca ICBM (Intercomtinental Ballistic Missile), kaas oo masaafadiisa aan xadka lahayn ka dhigayso wax-kamajiraan hannaanka difaaca gantaallada Maraykanka. Waxaa kale oo ka mid ah ‘Drone’ ka adeegta badaha hoostooda, kana dhgeereeya Gujisyada, awoodna u leh in laga rido gumucyo Nuclear ah ilaa gantaalka ‘Sarmat’ oo ah jiilka cusub ee qaaradaha isaga gudba.
Ereyada Putin ayaa ku soo beegmaya xilli dagaalkii Suuriya sii hurayo, arrintii Ucraine aan xal laga gaarin, NATO iyo Russiya labaduba qalab Militari ku soo gurayaan Yurubta bari. Calaamado dhamaantood dhalin kara xurguf dhexmarta Moskow iyo reer Galbeedka, laakiin midka u horreeya oo Cremlin-ku diiradda ku hayo yahay difaaca Maraykanka ‘Scud’ ee Yurubta bari.
Maraykanku waxay ka dhigayaan difaac loogu talagalay weerar ka yimaada Iiraan, laakiin Russia waxay u aragtaa halis toos ah, taas oo maanta Putin uu cagta ku dhuftay kuna tilmaamay wax laga soo gudbay.
Madaweynuhu wuxuu digniin, si gaar ah ugu socota Maraykanka iyo NATO, ka bixiyay in Moskow jawaab degdeg ah ka bixin doonto weerar kasta oo Nuclear ah oo lagu soo qaado gayigeeda ama kuwa dalalka bahwadaagta ay la tahay.
Madaxweynuhu waxaa kale oo uu ka hadlay la dagaallanka saboolnimada dalkiisa, iyada oo ciriirigii dhaqaale ee dhowaa, tirada dadka Ruushka ah ee noloshoodu ka hoos martay heerkii saboolnimada korortay 20 malyuun.
Wuxuu ballanqaaday in muddada xilka 5ta sano ee soo Socota mudnaanta 1aad la siin doono sidii loo kordhin lahaa 50% dakhliga GDP (Gross Domestic Product) ee wax soo saarka gudaha, si shaqooyin xurmo leh dadku u helaan.